Nhau - EXPONOR CHILE 2019
Exponor, inoratidza kuti inoitika muAntofagasta - Chile makore ese maviri, chengetera kufambira mberi kwazvino kwakanangana nebazi remigodhi. Icho chinhu chakakosha sosi yeruzivo nezve ramangwana rekudyara uye mukana wekugovana pasi nekambani uye varatidziri.
Dunhu reAntofagasta rakazvisimbisa semuzinda wemigodhi weChile nepasirese, sezvo ichipa 54% yekugadzirwa kwemaminera esimbi uye asiri esimbi nyika yese uye 16% yekugadzirwa kwenyika. Inotungamirawo chikamu chemapurojekiti emigodhi munguva ye2018-2025, inovhara 42% yezvirongwa zvese zvinosvika US $ 28,025 mamirioni, sekureva kweChilean Copper Commission, Cochilco (ona mushumo nekudzvanya apa).
Zvichakadaro, iyo Antofagasta Dunhu yakazvimisikidza sechiyero muindasitiri yeMagetsi nekupa 6,187 MW kuNational Electric System (SEN), ichijekesa kugadzirwa kwesimba rinowedzerwazve rinosvika 19% kuburikidza nefotovoltaic, mhepo, geothermal uye co-chizvarwa. Antofagasta Dunhu purojekiti portfolio inosvika US $ 24,052 mamirioni, zvichitungamira kuvandudzwa kwesimba rinowedzerwazve (91% yeiyo yakazara portfolio) uye kuve piyona mukugadzira matekinoroji senge geothermal simba uye rezuva simba wevasungwa (CSP).